ရဟန်းမင်းကြီးအသိအမှတ်ပြုထားသောသာသနာပြုအဖွဲ့အစည်းများအားမိန့်ကြားသောရဟန်း မင်းကြီးဖရန်စစ်၏သတင်းစကား | Radio Veritas Asia
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိသာသနာပြုအသင်းအတော်များများသည် ရဟန်းမင်းကြီးအသိအမှတ်ပြု ထားသောအသင်းများဖြစ်ပြီး၊ အချို့ အသင်းများမှာမူသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးများမှအသိအမှတ်ပြု ထားသောအသင်းများဖြစ်ကြသည်။ သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးများမှသာ အသိအမှတ်ပြုထားသောအ သင်းများသသည်ရဟန်းမင်းကြီး ၏အသိအမှတ်ပြုခံရရေးကြိုးစားနေကြသည်။
ရဟန်းမင်းကြီး၏အသိအ မှတ်ပြုခံ ထားရသောသာသနာပြုအသင်းများအားရဟန်းမင်းကြီးကအောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားခဲ့သည်။
သူတို့သည်အတူတကွစ​ေဝေးကြပြီးသောအခါ ကိုယ်တော်အား ‘သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော် သည်အစွရာအဲလ်လူမျိုးတို့အားသူတို့၏ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည့်အချိန်ရောက်ပြီလော’ ဟုမေး လျှောက်ကြ၏။ ကိုယ်တော်က ‘ခမည်းတော်သည်မိမိ၏တန်ခိုးအာဏာဖြင့်စီမံ ထား တော်မူသောအချိန် အခါနှင့်နေ့ရက်တို့ကိုသင်တို့သိပိုင်ခွင့်မရှိ။ သို့ရာတွင်၀ိညာဉ်တော်မြတ်သည် သင်တို့အပေါ်သို့ဆင်း သက်သောအခါ သင်တို့ သည်တန်ခိုးကျေးဇူးတော်ကိုခံယူကြရလိမ့်မည်။ ထိုအခါသင်တို့သည်ဂျေရုးစ လင်မြို့မှစ၍ဂျူဒေးယပြည်၊ ဆမာရိယပြည်နှင့်ကမာမြေကြီး စွန်း တိုင်အောင်ငါ့ကိုသက်သေခံသောသူ များဖြစ်ကြလိမ့်မည်’ ဟုသူတို့အားမိန့်တော်မူ၏။ ဤသို့ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူပြီးနောက် သူတို့သည် ကိုယ် တော့်ကိုကြည့်လျက်နေကြစဉ်တွင် ကိုယ်တော်သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပင့်ဆောင်ခြင်းခံတော်မူပြီး မိုးတိမ်တစ်ခုသည်ကိုယ်တော့်ကိုသူတို့၏ မြင် ကွင်းထဲမှဆောင်ယူသွားလေ၏။ (တမန်တော် ၁:၆-၉)
ယေဇူးသခင်သည်သူတို့အားမိန့်မှာတော်မူပြီးသည့်နောက် ကောင်းကင်ဘုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံ တော်မူ၍ ဘုရားသခင်၏ လက်ယာ ဘက်၌ထိုင်တော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့သည်လည်း ထွက်သွားကြ၍ တရားတော်ကိုအရပ်ရပ်၌ဟောပြောကြ၏။ သခင်ဘုရားသည်လည်းသူ တို့ နှင့်အတူလုပ်ဆောင်တော်မူ၍ သူတို့ဟောပြောသောတရားတော်မှန်ကန်ကြောင်းကိုသက်သေပြရန်တန်ခိုးလက်ခဏာများဖြင့်ကူညီ စောင်မတော် မူလေ၏။ (ရှင်မာကု ၁၆:၁၉-၂၀)
ကိုယ်တော်သည်သူတို့ကိုဘက်သနီရွာသို့တိုင်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှ မိမိ၏လက်တော်ကိုမြှောက်၍သူတို့အားကောင်း ချီးပေး တော်မူ၏။ ဤသို့ကောင်းချီးပေးတော်မူစဉ်တွင် ကိုယ်တော်သည်သူတို့ထံမှထွက်ခွာ၍ကောင်းကင်သို့ပင့်ဆောင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ သူတို့သည် လည်းကိုယ်တော့်ကိုရှိခိုးကြပြီးမှ ၀မ်းမြောက်ခြင်းကြီးစွာဖြင့်ဂျေရုစလင်မြို့သို့ပြန်သွားကြ၍ ဗိမာန်တော်၌ဘုရားသခင်ကိုအစဉ်မပြတ်ချီး မွှမ်း ထောမနာပြုကြလေ၏။ (ရှင်လုကာ ၂၄:၅၀-၅၃)
ယခုနှစ်ယေဇူးသခင်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူသည့်ပွဲနေ့တနဂ်နွေနေ့ဖြစ်သော မေလ (၂၁) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် သင်တို့ (ရဟန်းမင်းကြီးအသိအမှတ်ပြုထားသောသာသနာပြုအဖွဲ့ စည်း) ၏အထွေထွေအစည်းအေ၀းကြီးသို့တက်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့သည်။ ကိုဗစ် (၁၉) ကူး စက်ရောဂါကပ်ဆိုးကြောင့်အစည်းအေ၀းသည်ရွေ့ဆိုင်းထားရသည်။ ဤရောဂါကပ်ဆိုးကြီးသည် ကဏ္ဍပေါင်းစုံကိုရိုက်ခတ် သွားခဲ့သည်။ ဤသတင်းစကားကိုသင်တို့အားပါးလိုပါသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ် သင်တို့အားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြောကြားလိုသည် များကိုသိစေလိုပါ သည်။ ကျွန်ပ်တို့ရှင်သန်နေသော ခရစ်ယာန်များ၏ပွဲတော်သမယ၌ဤခရီးနှင့်အမူတော်အကြောင်းကိုထောက်ရှုဆင်ခြင်ရာတွင်အသီးအ ပွင့်များ ပိုမိုေ၀ဆာသည်ဟုခံစားရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပွဲတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီနှင့် သော်လည်းကောင်း၊ သာသနာတစ်ခုလုံးနှင့်သော် လည်းကောင်းဆိုင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဇူးသခင်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခြင်းကိုပွဲတော်အဖြစ်ကျင်းပကြသည်။ ယေဇူးသခင်၏ လောကမှကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်တက် ကြွသည့်အဖြစ်ကိုပြန်အောက်မေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရှေ့တိုင်းဝိနည်းကိုကျင့်သုံးသောသူများကာယေဇူးသခင် ကောင်းဘုံသို့တက်၍ခမည်း တော်ဘုရား၏
လက်င်္ကျာ ဖက်၌ထိုင်နေသည်ကိုကောင်းကင်တမန်များသည်အံ့အားသင့်၍ကြည့်နေကြသည်ဟုဆိုကြသည်။ ထို့အ တူပင် တပည့်တော်ကြီးများသည်လည်းယေဇူးသခင်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွနေသည်ကိုမြင်နေရသည့်တိုင်မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေကြသည်။ ယေဇူးသခင်သည်သူ၏နိုင်ငံ တော်ကိုတည်ထောင်ရန်နီးကပ်နေသည့်တိုင်တပည့်တော်ကြီးများ သည်ယခင်အတိုင်း အသိနိုးကြားခြင်း မရှိဘဲ ‘သခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော် သည်အစွရာအဲလ်လူမျိုးတို့အားသူတို့၏ နိုင်ငံကိုပြန်လည်ပေးအပ်မည့်အချိန်ရောက်ပြီလော’ ဟုမေးနေ ကြသည်။ (တမန်တော် ၁:၆)
တပည့်တော်ကြီးများသည်ယေဇူးသခင်အားမတွေ့ရတော့သော်လည်း ၀မ်းနည်းစိတ်မခံစားရ။ ၀မ်းမြောက်၀မ်းသာစွာဖြင့် ဂျေရူးစလင် မြို့သို့ပြန်သွားကြ၏။ (တမန်တော် ၂၄:၅၂) အကယ်၍ယေဇူး သခင်မိန့်မြွတ်သကဲ့သို့ဖြစ်မလာခဲ့သည်ရှိသောအတော် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စရာဖြစ်နေမည်။ သို့ သော်ယေဇူးသခင်ကားပင်တေကောစတယ် (ပါစကားပွဲပြီးရက်ပေါင်းငါးဆယ်) နေ့၌သန့်ရှင်းသော ၀◌ိညာဉ်တော် ဆင်းသက်စေမည့်အကြောင်းကတိစကားမိန့်ကြားထားပြီးသားဖြစ်သည်။ ထိုအခြေအ နေသည်အရာရာကိုပြောင်းလဲသွားစေမည့် အံ့ဖွယ်ရာ အခြေအနေဖြစ်သည်။ ယေဇူးသခင်နှင့်စကား အပေါ်ယုံကြည်မူထားရှိသောအခါ၄င်းတို့သည်ပို၍ယုံကြည်မူမြဲခိုင်လာသည်။ ပျော်ရွှင်မူဖြင့်ပြည့် သွားရ သည်။ ထိုပျော်ရွှင်မူသည်နှစ်သိမ့်မူပြည့်နေခဲ့သည်။ ယေဇူးသခင်ယခင်အတိုင်းရှိနေသည်ဟုခံစားမူကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ရှင်ပေါလုကတပည့်တော်ကြီးများအား၏ပြည့်၀စုံလင်သောပျော်ရွှင်ခြင်းသည်စိတ်ချမ်းမြေ့စေ သောခံစားချက်ကြောင့်မဟုတ်။ ထိုပျော် ရွှင်ခြင်းသည်သန့်ရှင်းသော၀◌ိညာဉ်တော်၏အသီးအပွင့်များ နှင့်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ (ဂါလာတိ ၅:၂၂) ဝိညာဉ်တော်၏ပျော်ရွှင်ခြင်း ကိုခံယူရရှိ ခြင်းသည် ကောင်းကြီးတော်ဖြစ်သည်။ ဤခွန်အားသည်သာ ကျွန်ုပ်တို့အားဧဝံဂေလိတရားကိုမမောမပမ်း ဟော ကြားရန်နှင့် ကျွန်ုပ် တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမရှက်မကြောက်သက်သေခံရန်အင်အားကိုပေးသည်။ ယုံကြည် ခြင်းဆိုသည်မှာယေဇူးသခင်ပေးသောပျော် ရွှင်ခြင်းကို သက်သေခံခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပျော်ရွှင်ခြင်းသည်မိ မိတို့ဖန်တီးရယူလိုက်သောပျော်ရွှင်ခြင်းမဟုတ်ပေ။
ယေဇူးသခင်သည်သူ၏တပည့်တော်ကြီးများအား၀ိညာဉ်တော်၊ နှစ်သိမ့်မူကိုပေးသောအရှင်ကို စေလွှတ်မည်ဟုတပည့်တော်ကြီးများ ထံမှမခွာမီကပင်မိန့်ကြားထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်လည်းအမိ သာသနာတော်၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းတော်ကိုသန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော် ကိုသူပြန်ကြွလာသည့်အချိန် တိုင်ထိုးအပ်ထားခဲ့သည်။ ယေဇူးသခင်၏ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ဘုရား ဆင်းသက်ခြင်းနက်နဲရာအချက်သည်သာသနာ၏သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုတံဆိပ်ခပ်နှိပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဘုရား၏အလုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံကောင်း ဉာဏ်ကောင်း၊ အစီအမံကောင်းကြောင့်မဟုတ်။ ဤအချက်သည်သာသနာတော်ကြီး၏သာသ နာပြုလုပ်ငန်းများ၌အသီးအပွင်များကိုပွင့်သီးစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အတူမိမိတော်တတ်သည်ဟုအထင်ကို လည်းဖျောက်စေပြီး၊
ှုခရစ္စတူး၏စစ် သူရဲဖြစ်သည်ဟုခံယူစေသည်။ သာသနာပြုခြင်းအမူ၌ သန့်ရှင်း သော၀ိညာဉ်တော်ဘုရား၏စွမ်းဆောင်ချက်ကိုအသိအမှတ်ပြု မခံယူပါ ကအ ဘယ်မျှစွမ်းသောသာသ နာပြုတို့၏စကားများဖြစ်ပါစေ။ လူသားစကားမျှသာဖြစ်သွားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မိမိဂုဏ် ဖော်ခြင်း၊ မိမိ၏အတွင်းသဣာန်ကိုဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကယ်တင်ခြင်းသည်ယေဇူးသခင်နှင့်ဆုံတွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သည်။ သနား သည်။ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံသို့စေလွတ်၍နှစ်သိမ့်စေသည်။ ကာ ကွယ်စေသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သာသနာပြုလုပ်ငန်း များ၏စွမ်း ဆောင်ချက်၊ ထိရောက် အောင်မြင်မူ၏ရလာဒ်မဟုတ်။ လူ့အဖြစ်ယူသောနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုဟောပြောသောကြောင့်မ ဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့ အတစ်ဦးစီအတွက်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားခေါ်သောသူနှင့်ဆုံတွေ့ခြင်းဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်ခြင်း၏နက်နဲရာသည်ပျော်ရွှင် ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်ခြင်းထွက်ပေါ်လာစေ သည်။ ဧ၀ဂေလိတရား၏၀မ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းသည် ပါစကားမနက်ယေဇူးသခင်၏သ ချိုင်းသို့လာကြသောကြေကွဲနေသည့်သနားဖွယ်ရာအမျိုးသမီးတို့၏ပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သချိုင်း သည်ခနွာမဲ့လျှက်ရှိသည်။ ထို့နောက်အသက် ရှင်နေသောယေဇူးကိုယ်တော်တိုင်ကိုပက်ပင်းတိုးခဲ့သည်။ ထိုပျော်ရွှင်မူကိုကြားပြောရန်တပည့်တော်ကြီးများထံသို့က ဆုန်စိုင်းပြေး၍ပြောကြား ပါတော့သည်။ (ရှင် မာတေဦး ၂၈:၈-၁၀) ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်ခံရမှ၊ သီးခြားသတ်မှတ်ခံရသူများသာလျင် ဘုန်းတော် နှင့်ပြန်လည်ရှင် ပြန် ထမြောက်သောခရစ္စတူးကိုကြေငြာဟောပြောနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လူတို့၏နီစ္စဓူဝ၌သက်သေခံကြသူများမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုလုပ်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဤသို့အားဖြင့် သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေဇူးသခင် နှင့်သူ၏၀ိညာဉ်ကိုသက်သေခံသူဖြစ်နိုင်သည်။ ရှင်မာကု၏ဧဝံဂေ လိကျမ်းအဆုံးပိုင်း၌ ယေဇူးသခင်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွ သွားပြီးနောက် တပည့်တော်ကြီးများ၊ တမန်တော်ကြီးတို့သည်လည်းထွက်သွားကြ၍တရားတော်ကိုအရပ်ရပ်၌ဟောပြောကြ၏။ သခင်ဘုရား သည်လည်းသူတို့ နှင့်အတူလုပ်ဆောင်တော်မမူ၍သူတို့ဟောပြောသောတရားတော်မှန်ကန်ကြောင်းကို သက်သေပြရန်တန်ခိုးလက်ခဏများဖြင့် ကူညီစောင်မ တော်မူလေ၏။ (ရှင်မာကု ၁၆:၂၀)
ယေဇူးသခင်သည်သူ၏၀ိညာဉ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ပြီးမြောက် အောင်မြင်စေသောအမူများဖြင့် သက်သေခံသည်။ ရှင်ဩဂုတ်စတင်းက ‘အမိသာသနာတော်ကြီးသည်ယေဇူးသခင်ကိုမသိသေးသောသူ များအားယုံကြည်ခြင်းပေးပါဟုမတောင်း။ ဘုရားသခင်၏စေ့ဆော်မူဖြင့်ယုံကြည် ခြင်းကိုခံယူကာဘုရား သခင်ထံလှည့်ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ အမိသာသနာတော်ကြီးသည်ယေဇူးသခင်၌ထားရှိသောယုံ ကြည်ခြင်းအဓွန့်ရှည် ရန်ဆုမတောင်း။ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ထား သည်ဟုမယုံကြည်သရွေ့သူအဘယ်မျှပင် ဆုတောင်းစေကာ မူ ယုံကြည်ခြင်းမြဲမည်မဟုတ်။ ထိုသို့ဆု တောင်းခဲ့ပါမူသူ၏ဆုတောင်းသည်အချီးနှီးသက်သက်ဖြစ်သွားပါသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းသည်စစ်မှန်သော ဆုတောင်းမေတ္တာကိုပြုခြင်းထက်သာသနာတော်မှချမှတ်ထားသောပုံသေနည်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းသာ ဖြစ်မည်။ (မှီငြမ်း။ ။ cf. On the Gift of Perseverance. To Prosper and Hilary, 23, 63)
ပျော်ရွှင်မူ ကိုအငမ်းမရရှာဖွေခြင်းနှင့်အခြားသူများ၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကြိုးစားခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်သော ခရစ္စတူးကိုမသိ သောသူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ကျကျနနစီမံကိန်း ကိုရေး ဆွဲစေကာမူ ယုံကြည်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်၏လက်ဆောင်ဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ် တို့လက်မခံလျင် သာသ နာမှဘုရားသခင်ထံပို့သသောဆုတောင်းမေတာပင်လျင်အဓိပါယ်မဲ့သွားသည်။
သန့်ရှင်းသော၀ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားထဲ၌ယုံကြည်ခြင်းကိုဆက်လက်ထိန်း သိမ်းထားပေးသည်ဟုယုံကြည်လျှင်အ ရာရာပြောင်းလဲသွားသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သာသနာတော်ကြီး၏သာသနာပြုခြင်းကိုထိရောက်အောင်မြင်စေသည်။ ဧဝံဂေ လိသတင်းကောင်းကြေ ငြာခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကို၀န်ခံခြင်းများသည်နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမူ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ သို့မ ဟုတ်ဘာသာရေး ကိုအတင်းအကြပ်သွပ်သွင်းခြင်းများနှင့်လုံး၀မတူပေ။
ပုပ်ဖရန်စစ်အရှင်သူမြတ်၏ ၂၀၂၀ ဇွန်လအတွက် ဆုတောင်းရန်ရည်ရွယ်ချက်
(၅၄) ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာ့လူထုဆက်သွယ်ရေးနေ့အတွက်ပုပ်ရဟန်းမင်း ကြီး၏မင်္ဂလာသတင်းစကား
သခင်ခရစ်တော် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွတော်မူသည့်ပွဲပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးမှ မိန့်ကြာ